EVY's Kitchen: ခွင့်တိုင်ခြင်း
ဘလော့နဲ့ ခဏဝေးမယ့်အကြောင်းကို မိတ်ဆွေတွေကို အသိပေးတဲ့ ပို့စ်လေးပါနော်။ ပထမတော့ Christmas နဲ့ New year မှာ မုန့်လုပ်ဖို့အားခဲထားတာ မထင်မှတ်ပဲ လုပ်စရာကိစ္စလေးတွေပေါ်လာလို့ မုန့်တွေ၊ ဟင်းတွေ အရင်ကလောက်တော့ ခပ်စိပ်စိပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ (အချိန်ရရင် ရသလိုတော့ ကြိုးစားတင်ပါဦးမယ်) ဖေဖော်ဝါရီလ လောက်ဆိုရင်တော့ အရင်လို မုန့်ပြန်လုပ်ချိန်ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
I'll be back and see you all soon. :D Wishing everyoneamerry Christmas & Happy New Year in advance.
Posted by Evy at 8:13 PM
အစ်မ အိုင်ဗီ၏ လုပ်စရာ ကိစ္စများ ချောချောမွေ့မွေ့နှင့် ပြီးမြောက်ပြီး ဘလော့ဂ်လေးမှာ စာတွေ အမြန်ဆုံး လာဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။ သတိရနေမယ့်
ပြန်လာရင် ကိတ်မုန့်တွေ အများကြီး လုပ်ကျွေးဦးနော်.. :)
နှစ်သစ်၊ စိတ်သစ်၊ မုန့်အသစ် နဲ့ပြန်လာပါ
အကြွေးသစ်တွေ တော့မယူလာနဲ့ :P
Merry X'mas & Happy Nwe Year
Evy, Merry Christmas and Happy New Year to you and your family!
ညမလေး EVY ရေ.